Farihy 20 lalina indrindra eran-tany - Victor Mochere
Ny farihy dia faritra feno rano, mipetraka ao anaty koveta, voahodidin'ny tany, ary miavaka amin'ny renirano na fivoahana hafa izay mamahana na manondraka ny farihy. Hita na aiza na aiza ny farihy; any amin'ny faritra be tendrombohitra, dobo filomanosana, faritra misy ranomandry mitsonika, ary faritra misaraka. Ny fihetsehan'ny ranomandry, ny fihotsahan'ny tany, ny fihotsahan'ny ranomandry, ny lavadrano, ny fipoahan'ny volkano, ary ny hafa dia nataon'olombelona no namoronana azy ireo. Miankina amin'ny toerana misy azy ireo, ny farihy dia miovaova amin'ny habeny, ny faritra ary ny halaliny.
Ny Bathymetry dia ny fandalinana ny halalin'ny ranomasina na ny gorodon'ny farihy, siansa ara-jeografika izay latsaka ambanin'ny elo lehibe kokoa amin'ny hydrographie. Amin'ny ankapobeny dia mitovy amin'ny topografika ambanin'ny rano izy io. Ny tsipika mitongilana dia manampy amin'ny fanehoana sy fandalinana ny endriky ny vatan'ny rano, manomboka amin'ny ranomasina ka hatrany amin'ny farihy. Ny ankamaroan'ny fanadihadiana momba ny bathymetric dia atao amin'ny alàlan'ny rafitra sonar, mamindra ny pulses izay 'ping' eny amin'ny ranomasimbe sy ny fanambanin'ny farihy, ka mampiseho izay ao ambany.
Ireto ny farihy 20 lalina indrindra eto an-tany.
1,642 m (5,387 p)
1,470 m (4,823 p)
1,025 m (3,363 p)
1,000 m (3,300 p)
836 m (2,742 p)
706 m (2,316 p)
668 m (2,192 p)
614 m (2,015 p)
594 m (1,949 p)
590 m (1,936 p)
Jeneraly Carrera-Buenos Aires
586 m (1,923 p)
514 m (1,686 p)
511 m (1,677 p)
505 m (1,657 p)
501 m (1,645 p)
500 m (1,640 p)
480 m (1,575 p)
464 m (1,523 p)
Roku vs Amazon Fire Stick: Iza no tsara kokoa?
Ahoana ny fomba hahazoana vola amin'ny blôginao